Utyalomali: Iiklabhu zebhola ekhatywayo zifumene phantse i-19% ngaphezulu | Ezezimali
Eyona ndlela yoqobo yokwenza ulondolozo lube yinzuzo ngebhola ekhatywayo kwaye ithunyelwe ngqo kwiBhola ekhatywayo ye-STOXX. Apho ezinye zeeklabhu zebhola ekhatywayo ezibaluleke kakhulu kwilizwekazi elidala zidityanisiwe. Isalathiso secandelo esenziwe ngamaqela angama-22 abamele amanye amaqela aphambili kwilizwekazi elidala. Kubo, amaqela aseJamani, amaTaliyane, amaFrentshi okanye amaTurkey. Ngokubaluleka kwe- IJuventus, iRoma. IPorto okanye iBorussia Dortmund. Akukho meko iklabhu yaseSpain ngaphandle kokudibana kukhuphiswano lwaseYurophu.
Phantsi kwalo mongo ngokubanzi, kubaluleke kakhulu ukufumana ubunzima obuthile bezi meko zeeklabhu zebhola ekhatywayo kwaye siqwalasele ukuba abanako na ukudibanisa ipotifoliyo yezokhuseleko kwiinyanga ezizayo. Kungenxa yokuba kutyalomali oluthile, apho kungekho kuphela iziphumo zoqoqosho ekufuneka zithathelwe ingqalelo, kodwa nokuba ibhola ingena kumnyango ochaseneyo na. Njengokuba kuye kwenzeka nje kutshanje ngeJuventus emva kokuba bekhutshiwe kwikota yokugqibela kwi League Championships Ubonile izabelo zakhe zestokhwe ziwela emgangathweni ngokuhla phantse kweepesenti ezingama-20.
Zizithengisi ezingenza imali eninzi kwiseshoni enye yokuthengisa. Kodwa nefuthe lokuba ii-euro ezininzi zisele endleleni. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi ukusuka kwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Apho iziphumo zakho zemidlalo ziphantse zabaluleka ngaphezu kwebhalansi yeakhawunti yakho yeshishini. Apho ungenakulibala khona ngaphezulu kweenkampani iiklabhu zebhola, ngako konke okulungileyo nokubi oku kufuneka kutyale imali yolondolozo ngesindululo esitsha ngokuqinisekileyo.
1 Ibhola ekhatywayo: ngaphezulu komdlalo nje
2 Ukukhula kwe-18%
3 Ingeniso yokusebenza yeklabhu
4 Ubutyala kwintengiso
5 Iparamitha zokujonga
6 Amalungelo kamabonakude
Ibhola ekhatywayo: ngaphezulu komdlalo nje
Ukuliqonda eli candelo likhethekileyo laseYurophu kubaluleke kakhulu ukuba bazi umvuzo abanawo kule minyaka idlulileyo. Akumangalisi ukuba yiparameter eya kuthi ibonise ukuba iqela kulo mdlalo liyinzuzo okanye hayi. Ukubonisa izikhokelo ukuba kufanelekile ukuba ibe yinto esisebenza ngayo kwiimarike zezabelo zaseYurophu. Ngaphandle kwento yokuba uninzi lwazo, kubandakanya iSpanish, azidweliswanga kwiimarike zezemali. Ngale ndlela, amaqela adwelisiweyo kunye nangaphandle kwale migaqo axutywe kwezi ziphumo zeshishini. Ingxowa exubekileyo apho bonke bephela.
Ngelixa ngokuchaseneyo, ezo zidityanisiweyo kwinto ebizwa ngokuba yiyo I-STOXX Yibhola yaseYurophu Oko akuthethi ukuba zezona zinamandla kwezoqoqosho. Kukho yonke into, ukusuka kwezo zingenisa ingeniso engaphezulu kwabo banokubaluleka okuncinci. Amaqela awafani kwaye ke ngoko ayabonakaliswa kolu luhlu kwinzuzo enikezelwa zezi nkampani zikhethekileyo iiklabhu zebhola. Apho ezinye zezona zinto zinenzuzo zingadweliswanga kwisalathiso esithile sale mibutho yemidlalo sibhekisa kuyo kweli nqaku.
Iiklabhu zebhola ekhatywayo zokuqala nezesibini zesaSpain zifumene ingeniso yehlabathi kwisizini ka-2017/18 ye-4.111 yezigidi zeerandi, ebimele ukukhula kwe-18,4% xa kuthelekiswa nexesha lonyaka elidlulileyo. Ngaphandle kokudluliselwa kwabadlali, ingeniso yecandelo ime kwi-3.400 yezigidi zeerandi, i-8,7% ngaphezulu, i-92% ihambelana neeklabhu zecandelo lokuqala. I-Real Madrid CF kunye neFC Barcelona babenemali epheleleyo eyi-1.441 yezigidi ze-euro, i-42% yetotali iyonke. Ezi zezinye zeziphetho zeNgxelo eSisiseko eKhethekileyo “yeeKlabhu zeBhola ekhatywayo” ezisandula ukupapashwa liCandelo lokujonga i-DBK Observatory ye-INFORMA (inkampani encedisayo yeCESCE), inkokeli kunikezelo lweeNkcukacha zoRhwebo, ezeMali, zeCandelo kunye neNtengiso eSpain nasePortugal.
Ngokwe-INFORMA's DBK Sectorial Observatory, ivolumu yeshishini kwihlabathi lebhola ekhatywayo yaseSpain igcine amandla amakhulu kule minyaka idlulileyo, ibhalisa ukukhula okuqhubekayo Zonke izinto eziphambili zengeniso. Yiyo loo nto, iiklabhu zesahlulo sokuqala nesesibini eziveliswe kwisizini ka-2017/18, kubandakanya ukuhanjiswa kwabadlali bebhola ekhatywayo, ingeniso ye-4.111 yezigidi zeerandi, emele ukwanda kwe-18,4% xa kuthelekiswa nexesha lonyaka elidlulileyo.
Ingeniso yokusebenza yeklabhu
Ngaphandle kokudluliselwa kwabadlali, ingeniso efikelela kwizigidi ezingama-3.400 zeerandi (ingeniso yokusebenza), i-8,7% ngaphezulu kwesizini ka-2016/17 kunye nama-54% ngaphezulu kwezigidi ezingama-2.212 ezirekhodwe ngo-2014/15. Icandelo lokuqala linika ingxelo ingeniso ye-3.126 yezigidi (91,9% yamanani ehlabathi), ngelixa iiklabhu zesahlulo sesibini zifumene i-274 yezigidi ezisele. Apho amaziko esizwe adlala indima efanelekileyo kwaye kuyenzeka ukuba kungabikho nalinye kuwo elidweliswe kwiimarike zezabelo. Ukuba kwezinye iimeko zezona zinengeniso ephezulu ngalo mzuzu.
Kwelinye icala, kufanele kuqatshelwe ukuba iReal Madrid CF kunye neFC Barcelona ngokudibeneyo bavelise ingeniso yokusebenza ye-1.441 yezigidi zeerandi, beqokelela isabelo se-42,4% yetotali. I-Real Madrid FC, kunye nengeniso ye-751 yezigidi zeerandi kunye ne-22,1% yokuthatha inxaxheba kwilizwe jikelele, yadityaniswa njengeklabhu enengeniso ephezulu, ngelixa i-FC Barcelona yayinengeniso ye-690 yezigidi, i-20,3%. Kwindawo yesithathu yayiyi-Atlético de Madrid, ethe ngeli xesha lonyaka yafikelela kwisabelo se-10,4% yengeniso iyonke yecandelo, ilandelwa yi-Sevilla FC kunye ne-Athletic Club, ngeepesenti ze-4,9% kunye ne-3,9% ngokwahlukeneyo.
Umsebenzi wentengiso kunye nentengiso ibingowona ubonise ukusebenza kakuhle kwisizini ka-2017/18, ivelisa ingeniso yebhola ekhatywayo eyi-914 yezigidi zeerandi, emele i-11,9% ngaphezulu kunakwisizini edlulileyo. Nangona kunjalo, oyena mqhubi uphambili wokukhula kwengeniso kumaxesha okugqibela ibe sisiqendu sosasazo. Ke, kwisizini ka-2017/18, iiklabhu zafumana i-1.543 yezigidi zeerandi zalo mbono, xa kuthelekiswa ne-1.033 yezigidi kwisizini ye-2015/16, eyayimele umahluko ophakathi ngonyaka we-22%.
Xa kuthelekiswa nexesha lonyaka ka-2016/17, ukwanda okubhaliswe kwiphulo lokugqibela kwaba yi-6,8%. Kufuneka iqatshelwe into yokuba ingeniso yokudluliselwa kwakhona imele malunga neepesenti ezingama-45 zerhafu yengeniso yokusebenza yeeklabhu zesahlulo sokuqala nesesibini, nangona kwiimeko ezili-14 le pesenti inyuke ngaphezu kwama-75%. Kwelabo icala, umdlalo umvuzo wosuku (ebandakanya ukhuphiswano kunye nababhalisi kunye namaqabane) inyuke nge-5,9% kwisizini ephelileyo, ukuya kwi-791 yezigidi zeerandi, nge-111 yezigidi zeerandi ezihambelana nenye ingeniso yokusebenza. Kwimeko ephindaphindekayo kwezi nkampani zemidlalo ezinokuba yinto yokusebenza kwabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Ngokubhekisele kwiiklabhu zebhola ekhatywayo ezidweliswe kwiimarike zezabelo, uthotho lwezinto kufuneka zigxininiswe ukuba zithathele ingqalelo ukuba umnqweno wabatyali zimali abancinci nabaphakathi kukuthatha izikhundla ngala maxesha achanekileyo. Kwindawo yokuqala, kwaye inokuba ngaphantsi kangakanani, i iziphumo zemidlalo kuphela: ukuba uphumelela imidlalo, ukuba uphumelele izihloko kunye neziganeko zezi. Zonke ezi zinto zixabisekileyo zinokunceda elinye lala maxabiso ukuba liwaxabise kwiimarike zezemali, ngamandla okanye kwelinye, njengoko sibonile kutshanje kunye nezinye zazo.
Ngelixa ngokuchaseneyo, into ebaluleke njengale inxulunyaniswa nokusayinwa kwabadlali bebhola ekhatywayo ayinakulityalwa nayo. Kwanele ukukhumbula okwenzekileyo ehlotyeni elidlulileyo ngokudluliselwa kwe Cristiano Ronaldo ukusuka kwiReal Madrid ukuya kwiJuventus yaseNtaliyane. Umsebenzi onokubandakanya izigidi ezininzi zeerandi ngokutshintshiselana kwezokhuseleko kwizitokhwe. Konke oku ngaphandle kokubonisa eminye imiba efanelekileyo kulungelelwaniso lwamaxabiso abo. Kwaye baya kuba ngabo abaya kuthi ekugqibeleni babeke ixabiso elichazwe ngumthetho wonikezelo kunye neemfuno kule klasi yeenkampani ezidweliswe kwiimarike zezabelo.
Ngayiphi na imeko, omnye wemithombo efanelekileyo yengeniso yeeklabhu zebhola yile inento yokwenza namalungelo kamabonakude. Babalulekile ukulinganisela uhlahlo-lwabiwo mali lwabo ngenxa yengeniso ephezulu abanokuyifumana kule mbono ibalulekileyo. Apho kunokubakho ezinye Umahluko omkhulu phakathi komnye nomnye. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba banokwamkelwa kakuhle ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi kwisigqibo sabo sokuthatha isikhundla kwisitokhwe.
Ezi ziidatha ngokungathandabuzekiyo ekufuneka zixatyisiwe zizo zonke iiarhente zentengiso ukuze zibonise ukuba lixesha elifanelekileyo na lokuvula izikhundla kolu khuseleko oludityanisiweyo kwi STOXX yaseYurophu yeBhola ekhatywayo yaseYurophu.
Kwindawo yokuqala, kwaye inokuba ngaphantsi kangakanani, i iziphumo zemidlalo kuphela: ukuba uphumelela imidlalo, ukuba uphumelele izihloko kunye neziganeko zezi. Zonke ezi zinto zixabisekileyo zinokunceda elinye lala maxabiso ukuba liwaxabise kwiimarike zezemali, ngamandla okanye kwelinye, njengoko sibonile kutshanje kunye nezinye zazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Utyalomali: Iiklabhu zebhola ekhatywayo zifumene phantse i-19% ngaphezulu